Elementor: Umhleli oMangalisayo wokuYila amaPhepha amaNqaku aMnandi kwi-WordPress kunye neZithuba | Martech Zone
NgoMgqibelo, Oktobha 17, 2020 NgoLwesithathu, uDisemba 23, 2020 Douglas Karr
Ngale mvakwemini, ndithathe iiyure ezimbalwa kwaye ndakha indawo yam yokuqala yomthengi ndisebenzisa i-Elementor. Ukuba ukwishishini leWordPress, sele uyivile i-buzz malunga ne-Elementor, basandula ukubetha ukufakwa kwezigidi ezi-2! Umhlobo wam uAndrew, osebenzayo AbaNxibelelanisi beNetGain, undixelele nge-plugin kwaye sele ndiyithengile ilayisensi engenamda yokuyisebenzisa kuyo yonke indawo!
I-WordPress ibuva ubushushu kubuchule bayo bokuhlela obunqabileyo. Kutshanje bahlaziyelwe kuGutenberg, umhleli wenqanaba lebhloko onika ukusebenza okongezelelekileyo… kodwa akukho apho kufutshane nezinye iindlela ezihlawulelweyo kwintengiso. Kukho konke ukunyaniseka, ndiyathemba ukuba baya kuthenga enye yezi plugins zihambele phambili.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, bendisebenzisa IAvada kubo bonke abathengi bam. Umxholo wakhiwe ngobunkunkqele, usebenzisa indibaniselwano yomxholo kunye neplagi ukugcina amandla okufomatha. Ixhaswe kakuhle kwaye inezinto ezithile ezimnandi ezazifuna ukukhula okanye ukuthenga kwangaphambili.
Mlawuli yahlukile kuba yiplagi kuphela kwaye inokusebenza ngaphandle komthungo phantse kuwo nawuphi na umxholo. Kwisiza endisakhele lo mthengi namhlanje, ndisebenzise nje umxholo osisiseko ocetyiswe liqela le-Elementor, the Umxholo we-Elementor Hello.
Ndikwazile ukwakha indawo ephendula ngokupheleleyo ngeemenyu ezinamathelayo, imimandla yeenyawo, amaphepha okufika afanelekileyo, kunye nokudityaniswa kwefomathi… kanye ngaphandle kwebhokisi. Kuyithathile kancinci into yokuqhelana nolawulo lwabaphathi, kodwa ndakuba ndiqondile ukubekwa kwetemplate, amandla ecandelo, kunye nezinto, ndiye ndakwazi ukurhuqa ndilahle indawo yonke kwimizuzu embalwa. Undigcinele iintsuku zexesha kwaye bekungafuneki ukuba ndihlele umgca omnye wekhowudi okanye i-CSS!
Imigaqo yoPapasho lweWordPress kunye neMiyilo
Ayisoloko isenziwa iplagi iza nezinto ezinamandla amangalisayo, kodwa nge-Elementor, ungacwangcisa iimeko, izinto ezinokubangela, kunye nemigaqo ephambili yendlela ofuna ukuba ii-popups zipapashe ngayo… konke kujongano olulula:
Umyili uyamangalisa, kwaye bade bakunike nemizekelo yeshelfufu oyilayo!
Ukongeza ekusebenzeni okuzivelelayo, iiNtengiso ezibandakanya
Amakhonkco Okusebenza - Dibanisa ngokulula nabaphulaphuli bakho ngeWhatsApp, Waze, Google Khalenda kunye nezinye iiapp
Widget yokubala Yandisa imeko yongxamiseko ngokongeza isibali-xesha esibuyelayo kwisithembiso sakho.
Ifom Widget -Usale kakuhle umva! Yenza zonke iifom zakho zihlale, kanye kumhleli we-Elementor.
Ukufika kwamaphepha -Ukudala nokulawula iphepha lokufika akukaze kube lula, konke ngaphakathi kwiwebhusayithi yakho yangoku yeWordPress.
Amanqaku Widget Star - Yongeza ubungqina bezentlalo kwiwebhusayithi yakho ngokubandakanya ukulinganiswa kweenkwenkwezi kunye nesitayile ukuthanda kwakho.
Widget yobungqina beCarousel -Yandisa ishishini lakho 'ubungqina bezentlalo ngokongeza ujikelezo lobungqina beCarousel yabathengi bakho abaxhasayo.
Ayisiyiyo iplagi efanelekileyo, nangona. Ndibaleke ndanemida embalwa ekufuneka uyiqonde:
Iindidi zePosi yesiqhelo Ngelixa unokuba nohlobo lwePosti yesiqhelo kwindawo yakho ye-Elementor, awungekhe usebenzise uMhleli we-Elementor ukwenza ezo ntlobo zeposti. Umsebenzi omnye woku kukusebenzisa iindidi zeposi ukulawula indawo kuyo yonke indawo.
Uvimba weBlog Ngelixa unokwenza iphepha eligciniweyo lebhlog kunye no-Elementor, ngekhe ukhombe kwelo phepha kuseto lwakho lwe-WordPress! Ukuba uyakwenza oko, iphepha lakho le-Elementor liya kuqhekeka. Lo ngumbandela ongaqhelekanga owandithatha iiyure ukuwuqonda. Ngokukhawuleza xa ndibeka iphepha lebhlog nanye, yonke into isebenze kakuhle. Leyo yi-bummer, nangona ukuseta iphepha lebhlog kusetyenziswa kuyo yonke imisebenzi yeetemplate zeWordPress. Ayizukuthintela indawo yakho nangayiphi na indlela, yingxaki nje engaqhelekanga.
Inkxaso yeLightbox -Umxholo wokuphambuka upholile, kodwa ukubanakho kweqhosha lokuvula ibhokisi yokukhanyisa ukubona igalari okanye ividiyo ayikho. Nangona kunjalo, kukho into emnandi Izinto ezongezelelweyo zokongeza ebonelela ngoluhlobo kunye nezinye ezininzi.
Ukuba ukhe walungiselela ukudityaniswa kwi-WordPress, uyazi ukuba kunokuba nzima kangakanani. Ewe, i-Elementor iye yaphucula ukudityaniswa kunye neMailchimp, ActiveCampaign, Ukuguqula iKit, ukujonga uMkhankaso, Hubspot, Zapier, donReach, Drip, GetResponse, Adobe TypeKit, reCAPTCHA, Facebook SDK, MailerLite, Slack, kunye neNgcaciso!
Jonga zonke izinto eziSisiseko
Ukwandisa i-Elementor enezinto ezingakumbi!
IiAddons zokugqibela ilayibrari ekhulayo yokwenene kunye noyilo olwahlukileyo lwamawijethi avula uluhlu olutsha lwamathuba oyilo lwakho. Iphakheji engummangaliso ibandakanya:
Widgets kunye nezandiso -Ilayibrari ekhulayo yeewindows ezingama-40 + ezizodwa ezithatha ubuchule bakho bokuyila kwinqanaba elitsha!
Iitemplate zeWebhusayithi -Ngaphezulu kwe-100 enziwa ngokwezifiso kunye neetemplate zewebhusayithi ezibukekayo eziza kukhawulezisa ukuhamba kwakho.
Icandelo leeBhloko -Iibhloko ezingaphezulu kwama-200 ezakhelwe kwangaphambili zirhuqiwe, zaphoswa, kwaye zalungiswa, zinika iphepha lakho uyilo olwahlukileyo kunqakrazo olumbalwa.
Nokuba uyingcali yoyilo okanye ungumntu omtsha, uya kukukhawulezisa ukuhamba komsebenzi wakho kwaye ufezekise uyilo olwahlukileyo ngokulula ngokupheleleyo.
Ukubhengezwa: Ndiyazingca ndisebenzisa amakhonkco endinawo kweli nqaku!
tags: elementorIzongezo zokuqalaitemplate yephepha lokuqalaiiwijethi zento yokuqalaiplagi yamagama ethandwayoumhleli wegamaUmyili wephepha elinamagamaUmhleli wephepha legamaiplagi yamagama